Imibandela yokusizakala - Sendfiles.online
Siyabonga ngokusebenzisa i-Sendfiles.online!
Ngezansi uzothola ukuhumusha okunzima kwemigomo yethu yokusebenza ngesiNgisi nenqubomgomo yethu yobumfihlo ngesiNgisi ngezici zezomthetho, zombili zisebenza ngesiNgisi kuphela.
Ngokungena kuwebhusayithi kuwebhusayithi ethi: Uma ungavumi w
Kunikezwe imvume yokulanda okwesikhashana ikhophi elilodwa lezinto zokwakha (imininingwane noma isoftware) kuwebhusayithi ye-Sendfiles.online ekubukeni komuntu siqu, okungeyona kwezentengiso kuphela. Lokhu kunikezwa kwelayisense, hhayi ukudluliswa kwesihloko, nangaphansi kwe-t
shintsha noma ukopishe izinto zokwakha;
sebenzisa izinto ezisetshenziselwa noma yiziphi izinhloso zentengiso, noma noma yisiphi isikhangiso esenziwa ngumphakathi (ezentengiso noma ezingezona ezentengiso);
ukuzama ukubola noma ukuguqula kabusha unjiniyela noma iyiphi isoftware equkethe kwiwebhusayithi yeShipfiles.online;
susa noma imiphi imininingwane ye-copyright noma eminye imininingwane ephathelene nezinto zokwakha; noma
dlulisela izinto komunye umuntu noma 'ezibukweni' izinto kunoma iyiphi enye iseva.
Le layisense izonqanyulwa ngokuzenzakalelayo uma wephula noma iyiphi yale mikhawulo futhi ingaqedwa ngu-Sendfiles.online nganoma yisiphi isikhathi. Lapho usuqedile ukubuka kwakho lezi zinto noma lapho unqunyelwe le layisense, kufanele uchithe noma yiziphi
3. Inqubomgomo Yokugcina
I-Sendfiles.online igcina amafayela amahora angama-48. Ngaleso sikhathi lapho amafayela esulwa khona. Amafayili ahambisana nekheli le-imeyili elilayishe. Uma kungeniswe i-imeyili kuzothunyelwa nakho okugcinwe. Uma amafayela athunyelwe lapho evela kumsebenzisi we-Pro, kusebenza imigomo ehlukile futhi izokhonjiswa ekhasini lokuxhumanisa lokuvula.
Izinto ezisetshenziselwa iwebhusayithi ye-Sendfiles.online zinikezwa ngesisekelo se-'as is '. I-Sendfiles.online ayenzi siwaranti, iveziwe noma iveziwe, futhi ngalokhu kuyayikhulula futhi ikhiphe lonke olunye iwaranti kufaka, ngaphandle komkhawulo, amawaranti akhonjisiwe noma i-condi
Ngaphezu kwalokho, i-Sendfiles.online ayiqinisekisi noma yenze izethulo eziphathelene nokunemba, imiphumela engaba khona, noma ukuthembeka kokusetshenziswa kwezinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yayo noma ngenye indlela ephathelene nezinto ezinjalo noma kunoma yiziphi izingosi ezixhumene nale sayithi.
Akunamcimbi oyobe uSitefiles.online noma abahlinzeki bawo bezokhokhiswa noma yimuphi umonakalo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukulimala kokulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazamiseka kwebhizinisi) okuvela ekusebenzeni noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto ku-Sendfiles.o
6. Ukunemba kwezinto zokwenziwa
Izinto ezibonakala kuwebhusayithi ye-Sendfiles.online zingafaka phakathi amaphutha wezobuchwepheshe, wokushicilela, noma wezithombe. I-Sendfiles.online ayiqinisekisi ukuthi noma yiziphi izinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yayo zinembile, ziphelele noma zamanje. Sendfiles.online may m
I-Sendfiles.online ayibukezi zonke izingosi ezixhunywe kwiwebhusayithi yayo futhi ayinasibopho sokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi elixhunyiwe. Ukufakwa kwanoma yisiphi isixhumanisi akusho ukuthi kuvunyelwe yi-Sendfiles.online yesayithi. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi exhumekile
I-Sendfiles.online ingabuyekeza le migomo yesevisi yewebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuqaphela. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuboshwa yinguqulo yamanje yamanje yale migomo yesevisi.
9. Umthetho Ophethe
Le migomo nemibandela ilawulwa futhi yenziwa ngokuhambisana nemithetho ye-Connecticut futhi ngokungenakuphikiswa uhambisa igunya elikhethekile lezinkantolo kulelozwe noma kuleyo ndawo.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,267 amafayela athunyelwe kusukela ngo-2020